> Electronics>DeLonghi PrimaDonna Exclusive ESAM 6900 Fully Automatic Bean-to-Cup Coffee Machine
Reference ESAM 6900
Dimensions (w xdx h cm): 28.5x42.0x40.5
အလွယ်တကူ CAPPUCCINO, CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, MILK and CHOCOLATE ပြုလုပ်နိုင်သော စနစ်ပါဝင်ခြင်းအလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း
Bean-to-cup machine with the De'Longhi patented automatic cappuccino system with an intuitive full color screen and6metal touch pads to get the perfect cappuccino, caffelatte, latte macchiato, milk, long coffee and chocolate. With the chocolate function and its dedicated chocolate jug,aperfect hot chocolate can be prepared with ease. The extra cappuccino device can be used for steam and hot water and the machine is also equipped withacup warmer and water filter. It is made in Italy. Besides2year service warranty is provided.
ကော်ဖီ နှစ်သက်သူတို့၏ ဘ၀ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် De'Longhi မှ ထုတ်လုပ်သော ကော်ဖီစက်များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုကြည့်စေချင်ပါသည်။ De'Longhi ၏ ESAM 6900 ကော်ဖီစက်သည် အရည်အသွေး မြင့်မားသော သတ္တုခလုတ် (၆) ခုနှင့် ရောင်စုံမျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကော်ဖီကို လွယ်ကူစွာရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ခွက်များကိုအပူပေးနိုင်သလို ရေနွးပူလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ကော်ဖီအမှုန့်စစ်ဇကာကို အလွယ်တကူ ဖြုတ်၍ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာကာ လူမပင်ပန်းဘဲ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ကော်ဖီများ သောက်သုံးရင်း ပိုမို စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
* အီတလီနိုင်ငံထုတ်စက်ဖြစ်ပါသည်* ၀န်ဆောင်မှု (၂)နှစ် အာမခံပေးထားပါသည်